မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | Songz Automobile လေအေးပေးစက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်များအပြင် SONGZ တွင်အခြားလေအေးပေးစက်ထုတ်ကုန်များရှိပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထရပ်ကားလေအေးပေးစက်နှင့်လျှပ်စစ်ကားရပ်နားရန်အအေးများပါ ၀ င်သည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက sales@shsongz.com နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
၂။ SONGZ သည်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားလေအေးစက်၏ R&D ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်ခဲ့သနည်း။
ကျနော်တို့က R&D ကို ၂၀၀၉ မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာပထမနှစ်မှာ ၃၂၅၀ ယူနစ်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုနောက်မှအရောင်းအရေအတွက်သည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၂၈၇၃၇ ဦး အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
3. SMC ၏ပစ္စည်းကဘာလဲ။
SMC (Sheet Mounding Compound) ပေါင်းစပ်သောပစ္စည်းများကိုတစ်ချိန်ကမှိုမှအပူချိန်မြင့်မြင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ မြင့်မားသောစက်မှုစွမ်းအား၊ အလင်းအလေးချိန်ရှိသောပစ္စည်းများ၊ ချေးခြင်း၊ ကြာရှည်သောသက်တမ်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ လျှပ်ကာခံနိုင်ခြင်း၊ arc ခုခံခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အပြင်ဘက်အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများ၏အမျိုးမျိုးသောကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်များနှင့်နေရာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေကာကွယ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူလုံခြုံမှုနှင့်လှပမှု၏အားသာချက်များရှိသည်။
SONGZ သည်ဖိုင်ဘာဖန်အဖုံး၏နေရာကိုယူရန် SZR နှင့် SZQ စီးရီးရှိဘတ်စ်ကားလေအေးပေးစက်အဖုံးတွင် SMC ၏ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်။
SMC နှင့် Fiber ဖန်အဖုံးအကြားနှိုင်းယှဉ်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစား အဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားအောက်တွင်လက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ခြင်း။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံရန်ခက်ခဲပါသည် compression molding သည် SMC စာရွက်ပုံသဏ္compoundာန်ဒြပ်ပေါင်းများကိုပုံသွင်းသောအပူချိန်တွင်ပုံသွင်းသောအခေါင်းပေါက်ထဲသို့ထည့်ပြီးပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်း၊ compression molding ကိုပလတ်စတစ်နှင့် thermoplastics များအတွက် thermosetting အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ချောမွေ့ တစ်ဖက်တွင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးသည်အလုပ်သမား၏လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ပေါ်မူတည်သည် နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ချောချောမွေ့မွေ့, အရည်အသွေးကောင်း
ထုတ်ကုန်ပုံပျက်သော ထုတ်ကုန်တွင်ပုံပျက်သောပမာဏရှိပြီးထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်အပူချိန်နှင့်လက်စွဲလည်ပတ်မှုတို့ကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်သည် ထုတ်ကုန်၏ပုံပျက်သောသေးငယ်သည်နှင့်အပူချိန်နှင့်အလုပ်သမားများ၏အဆင့်နှင့်အနည်းငယ်သာဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်
ပူဖောင်း ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်အထူသည်အလွှာအလွှာအရေအတွက်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ အလွှာများကိုထိုးဖောက်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန်မလွယ်ကူ။ အထူကိုနို့တိုက်ကျွေးမည့်ပမာဏနှင့်မှိုမှဆုံးဖြတ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားမြင့်ပုံသွန်းခြင်းကြောင့်ပူဖောင်းများထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ
အက်ကွဲ ၁။ ထုတ်ကုန်များပုံပျက်သောကြောင့်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။၂။ ထုတ်လုပ်မှုနှေးကွေးသောအပူချိန်နိမ့်ကျခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်ပေါ်၌အက်တမ်အက်ကြောင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်
(၃) ထုတ်ကုန်၏တောင့်တင်းခိုင်မာမှုကြောင့် elasticity သည်ပုံသွင်းခြင်းထက်သာလွန်သည်။ မျက်နှာပြင်ဆေးသုတ်မှုသည်ထုတ်ကုန်၏ကောင်းသောလိုင်းများတွင်ကျရောက်နိုင်သည်။
ရလဒ် ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာနည်းသည်၊ ထုတ်လုပ်မှုနိမ့်သည်။ သုတ်များနှင့်မသင့်ပါ။ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်နှင့်မှိုအရေအတွက် (၃-၄ အပိုင်းအစ / မှို / ၈ နာရီ) သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုများစွာထိခိုက်သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်လျော်သောအကြီးစားကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၈၀-၂၀၀၀၀ ခွက် / မှို / ၂၄ နာရီ)
4. LFT ရဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲ။
LFT ကိုရှည်လျားသောဖိုင်ဘာအားဖြည့်သည့် thermoplastic ဟုလည်းလူသိများသည်။ ထုံးစံအရ PP နှင့်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်မှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ရှည်လျားသောဖိုင်ဘာ - အားဖြည့်ထားသော thermoplastic ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဟုလည်းလူသိများသည်။ မတူကွဲပြားသောအပိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အထူးအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အမျှင်များ၏အရှည်သည်ယေဘုယျအားဖြင့် 2mm ထက်ကြီးသည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောနည်းပညာသည် 5mm အထက် LFT တွင်ရှိသော fiber ၏အရှည်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗဓေလသစ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမျှင်များအသုံးပြုခြင်းပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်များကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်သည်ရှည်လျားသောသို့မဟုတ်ချပ်ပုံသဏ္,ာန်ရှိနိုင်သည်၊ အပူချိန်သတ်မှတ်ထားသောထုတ်ကုန်များအစားထိုးခြင်းအတွက်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသောပန်းကန်၏အကျယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘားတစ်ခုပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
တိုတိုဖိုင်ဘာအားဖြည့် thermoplastic ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ LFT ၏ 5.The အားသာချက်များ
တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်းနှင့်တိကျခိုင်မာခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
အဆိုပါပုတ်ခုခံတိုးတက်လာသည်။ အဆိုပါရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုကောင်းလှ၏။ ထိုအခါအစိတ်အပိုင်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှုတိကျမြင့်မားသည်။
LFT ပစ္စည်းများကို SZR စီးရီးများ၊ SZQ စီးရီးများနှင့် SZG စီးရီးများ၏ကျဉ်းမြောင်းသောကိုယ်ထည်ပုံစံ၏ဘတ်စ်ကားလေအေးပေးစက်တွင်အသုံးပြုသည်။
SZG အတွက် LFT အောက်ခွံ (ကျဉ်းမြောင်းသောကိုယ်ခန္ဓာ)